JouleCoin စျေး - အွန်လိုင်း XJO ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို JouleCoin (XJO)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ JouleCoin (XJO) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ JouleCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $153 367.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ JouleCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
JouleCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
JouleCoinXJO သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00823JouleCoinXJO သို့ ယူရိုEUR€0.00698JouleCoinXJO သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00631JouleCoinXJO သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00751JouleCoinXJO သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0744JouleCoinXJO သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.052JouleCoinXJO သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.184JouleCoinXJO သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0308JouleCoinXJO သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.011JouleCoinXJO သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0115JouleCoinXJO သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.184JouleCoinXJO သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0638JouleCoinXJO သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0448JouleCoinXJO သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.617JouleCoinXJO သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.38JouleCoinXJO သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0113JouleCoinXJO သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0125JouleCoinXJO သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.257JouleCoinXJO သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0573JouleCoinXJO သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.872JouleCoinXJO သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩9.79JouleCoinXJO သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦3.12JouleCoinXJO သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.607JouleCoinXJO သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.228
JouleCoinXJO သို့ BitcoinBTC0.0000007 JouleCoinXJO သို့ EthereumETH0.00002 JouleCoinXJO သို့ LitecoinLTC0.000144 JouleCoinXJO သို့ DigitalCashDASH0.00009 JouleCoinXJO သို့ MoneroXMR0.00009 JouleCoinXJO သို့ NxtNXT0.597 JouleCoinXJO သို့ Ethereum ClassicETC0.00117 JouleCoinXJO သို့ DogecoinDOGE2.29 JouleCoinXJO သို့ ZCashZEC0.00009 JouleCoinXJO သို့ BitsharesBTS0.323 JouleCoinXJO သို့ DigiByteDGB0.303 JouleCoinXJO သို့ RippleXRP0.028 JouleCoinXJO သို့ BitcoinDarkBTCD0.000283 JouleCoinXJO သို့ PeerCoinPPC0.0284 JouleCoinXJO သို့ CraigsCoinCRAIG3.74 JouleCoinXJO သို့ BitstakeXBS0.35 JouleCoinXJO သို့ PayCoinXPY0.143 JouleCoinXJO သို့ ProsperCoinPRC1.03 JouleCoinXJO သို့ YbCoinYBC0.000004 JouleCoinXJO သို့ DarkKushDANK2.63 JouleCoinXJO သို့ GiveCoinGIVE17.75 JouleCoinXJO သို့ KoboCoinKOBO1.92 JouleCoinXJO သို့ DarkTokenDT0.00758 JouleCoinXJO သို့ CETUS CoinCETI23.67
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 07 Aug 2020 21:40:02 +0000.